Mooshinka Jawaari ma noqon doonaa Malaka-mowdka Baarlamaanka DFS lagu kala diri doono? – Madal Furan
Hoy > Warka > Mooshinka Jawaari ma noqon doonaa Malaka-mowdka Baarlamaanka DFS lagu kala diri doono?
Mooshinka Jawaari ma noqon doonaa Malaka-mowdka Baarlamaanka DFS lagu kala diri doono?
Muqdisho (Madal Furan) – Waxaa Toddobaadyadii la soo dhaafay magaaladda Muqdisho ka socday olole siyaasadeed oo kala qaybiyey Xildhibaanadda Aqalka hoose ee Baarlamaanka DFS, kaasoo ka soo unkamay mooshin ay tiro Xildhibaano ahi ka keeneen Guddoomiyaha Baarlamaanka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Kala qaybsanaanta Xildhibaanadda taageersan Guddoomiye Jawaari iyo kuwa u ololeynaye Mooshinka xil ka qaadistiisa ayaa gaaray heer ay adkaatay in wax laga qabto kadib markii ay Siyaasiyiin Soomaali ah, Bulshadda Caalamka iyo Diblomaasiyiin kaleba isku dayeen in la qaboojiyo khilaafkan.
Mooshinka ay Xildhibaanadda Baarlamaanka Soomaaliya isku jiidjiidanayaan ayaa wuxuu ku soo beegmay xili ay dowladda Federaalka Soomaaliya ay waday hawlo firfircoon oo wax looga qabanayey caqabadaha siyaasadeed iyo duruufeed haysta dalka Soomaaliya.
Waxaa dad badani rumeysan yihiin in mooshinkani uu dib-u-dhac weyn ku riday hawl maalmeedkii dowladda FS, iyadoo ay hawlgab noqdeen Hayado badan oo laga sugayey wax qabad ku wajahan dhibaatooyinka Shirkaddaha Caalamiga ah sida DP World, derbiga ay dowladda Kenya ka dhisaneyso xuduuda Soomaaliya, dardar gelinta hirgelinta canshuuraha, dib-u-qaabeynta Ciidamadda qalabka sida, Dib-u-eegista Dadstuurka Qaranka, Qabanqaabada doorashooyin wadanka ka dhaca sanadka2021 iwm.
Waxaa kaloo dib-u-dhac uu ku yimid kal-fadhigii Aqalka Hoose ee Baarlamaanka Soomaaliya oo aan kulmin tan iyo markii uu dhashay mooshinka ka dhanka ah Guddoomiye Jawaari.
Haddaba, dad badan ayaa rumeysan in Madaxweynaha DFS Maxamed C/laahi Farmaajo la gaaray wakhtigii uu xisaabtami lahaa oo go’aan taariikhi ahna ka qaadan lahaa khalkhalka siyaasadeed ee jilbaha u laabay Baarlamaanka DFS.
Madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo ka hadlay DP World iyo dimoqoraadiyadda Jabuuti
Sonkor daroogo lagu soo qariyey oo lagu eedeeyey dad sharci u haysta inay dalka Kenya geliyeen
Puntland oo Saraakiil Ajnebi ah ka cayrisay dhulkeeda.